News Collection: औंठीले बनाउला हिट ?
औंठीले बनाउला हिट ?
हिजोआज सुटिङ सेटमा प्रायः रेखा थापाको हीराको औंठीको चर्चा हुनेगर्छ । औंलामा दुई-दुईवटा औंठी हुँदाहुँदै रेखाको अर्को औंलामा हीराको नयाँ औंठी थपिएको छ । पाँचलाख मूल्य पर्ने १ क्यारेट ११ लालको डायमन्ड औंठी लगाएकी रेखाको औंठी किस्सा पनि निकै रमाइलो छ । पोहोर साल औंठी हराउँदा 'कसले चोर्‍ यो मेरो मन' रिलिज हुँदै थियो भने ठीक एकवर्षपछि नयाँ औंठी किन्दा 'अन्दाज' रिलिज हुँदैछ ।
दैवी शक्ति रहेको ठानिने सुन्दरीजलमा औंठी हराउँदा सिनेमा हिट भएको मान्यता राख्ने रेखालाई नयाँ औंठीको शक्तिले पनि 'अन्दाज' हिट गराउने विश्वास लागेको छ । उनकै होमप्रोडक्सन सिनेमा 'अन्दाज' असोज १६ देखि काठमाडौं र २० देखि काठमाडौंमा रिलिज हुँदैछ । 'देवीको बास रहेको सुन्दरीजलमा औंठी हराउँदा राम्रै भयो' रेखा भन्छिन् 'भेट्टाएको त होइन तर किनेको नयाँ औंठीले राम्रै गराउने आशा छ । मलाई लाग्छ-अन्दाज हिट हुन्छ ।'
'अन्दाज' हिट हुन्छै भनेर रेखाले रिलिजको बेला पारेर औंठी किनेकी भने होइनन् । किनिसकेर झस्किएको बताउँछिन् उनी । हुन त दैवीशक्तिमा विश्वास राख्नेहरु सिने उद्योगमा प्रशस्त छन् । रेखा भने यो मामिलामा एक कदम अघि छिन् । हीराको औंठीमा शुक्रग्रहको प्रभाव बढी हुने भएकाले शुभलाभ पनि हुने उनको विश्वास छ । सुन र मोतीको गहना लगाउन नरुचाउने रेखालाई हीराको औंठीले के साँच्चै आफ्नो फिल्म हिट बनाइदेला ? औंठीको कमाल हेर्न असोज १६ कुर्नैपर्ला कि ?